Shiinaha carruurta caadada u ah tayada dharka midabka suufka dharka polarka warshad iyo soo saareyaasha | Himilada
caadooyinka carruurta tayada leh dharka shaati-gacmeedka dharka suufka ah
U labbis ilmahaaga waxoogaa ka caqli yar shaarka polo ee carruurteena oo muuji abuurkaaga cajiibka ah adoo abuuraya polo leh naqshadaha iyo sawirrada aad ugu jeceshahay.
Shaararka carruurtayada ee loo yaqaan 'polo' waxay ku habboon yihiin carruurta ballaaran ee da'da ah waxayna ku habboon yihiin goobta ciyaarta, garoonka isboortiga ama dharka dugsiga. Muujinta 2 badhan oo laga sameeyay 100% cudbi cudbi ah caqligaan, polo jilicsan ayaa u muuqda mid caqli badan sanadka oo dhan. Naqshadee dharkaaga shaati-gacmeedyada adigoo isticmaalaya qoraallo qaas ah, sawirro ama naqshado!
Waxay macnaheedu tahay inaad heshay kan ugu fiican labada adduun! Polo dhalinyaro cusub oo muuqaal ah oo kooxdaadu jeclaan doonto inay xirato.
Cabir Dhererka jirka Laab Dhererka darafta
Hore: dhidid dhuumaha dharka jumlada ah ee dharka jumlada loo yaqaan 'personnalisable pullover hoodie'
Xiga: Haanta Sare
Shirt Polo Rugby
Shaati Polo Tennis